» चुनाव जित्ने चन्द्र मन्त्र : नेतृत्व भनेको संकटको सारथी हो, संकटसँग जुध्न बलियो टिम हामीसँगै छ
चुनाव जित्ने चन्द्र मन्त्र : नेतृत्व भनेको संकटको सारथी हो, संकटसँग जुध्न बलियो टिम हामीसँगै छ
‘निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको सशक्त इन्जिन हो’
मुलुकका निजी व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न चुनावलाई लिएर यतिखेर सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्र तरङ्गित छ । मङ्सिर ११ गतेबाट सुरुभई १३ गते महासंघको आगामी कार्याकालका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । यस चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यमा चन्द्रप्रसाद ढकाल उम्मेदवार छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार चन्द्रप्रसाद ढकालका चुनावी एजेण्डा र उनको विचारसँग केन्द्रित रहेर ढकालसँग गरिएको कुराकानी
यहाँ हाल महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । हाल उपाध्यक्ष रहेका यहाँले महासंघमा १० वर्ष बिताउँदासम्म के काम गर्नुभयो ?
मेरो मान्यता त म आफैले के गरेँ भनेर आफ्नो बारेमा भन्ने होइन भन्ने नै हो । मेरो कामको मूल्यांकन मेरा अग्रजहरुबाट पनि भएकै छ । म कार्यकारिणी समिति सदस्यमा पहिलो पटक आउँदा अध्यक्ष रहनुभएका आदरणीय सुरज वैद्यदेखि आजसम्म मैले संस्थाको लागि के दिन सकेँ र मुलुकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरुले मेरो भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ भन्ने नै मेरो संस्थागत सम्पत्ति हो । त्यो नै वास्तवमा मेरो उपलब्धि हो ।
मलाई लाग्छ मलाई संस्थाले दिएको उपलब्धि अब्बल दर्जामा रहेर पूरा गर्न सकेँ भन्ने छ । यहाँ रहँदा १० वर्षसम्म गरेको कार्यलाई अहिले नै पूरै स्मरण गर्न त नसकौँला तर जस्तो कि पछिल्लो एक उदाहरण रोजगारदाता परिषदको सभापतिका रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक विवादको समाधानलाई पनि लिन सकिन्छ । लकडाउन अवधिको तलबमान निर्धारणका विषयमा म आफू नै सो परिषदको सभापति भएकोले एफएनसिसिआइको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दथ्यो, गरेँ ।
सरकार र मजदुर साथीहरुका प्रतिनिधिहरुसँग बसेर नेगोसिएसन गर्नुपर्ने थियो र गरियो । यहाँलाई पनि थाहै छ कि यसमा सरकारको निर्णयभन्दा एक कदम अगाडि सरेर मजदुर प्रतिनिधिलाई ५० प्रतिशत तलबमा सहमत गराउने काम मेरै समन्वयबाट भएको हो, जुनकुरा मिडियामा आइनै सकेको छ । यसरी यसलाई सिङ्गो निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पाएको अवसरका रुपमा पनि मैले लिएको छु ।
यहाँलाई विदितै छ कि निजी क्षेत्र देशको समृद्धिको यात्राको दरिलो खम्बा हो । तर त्यही निजी क्षेत्रले राज्यको तर्फबाट अपेक्षाअनुसार सम्मान पाउन भने सकेको छैन । जुन बेला मुलुकको निजी क्षेत्रलाई आवश्यक परेको छ, अभिभावक चाहिएको हुन्छ त्यस बेला भने अभिभावकको भूमिका प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रा कतिपय अनुभवहरु छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको समग्र उद्योग व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आधा शताब्दीभन्दा लामो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छाता संस्था हो ।
हो, मेरो उम्मेदवारी देशको यो क्षेत्रले त्यो सम्मान पाउन सक्ने अवस्था दिलाउनका लागि हो, राज्यबाट अभिभावकत्व पाउनका लागि हो । यसका लागि हामीले संघर्ष र सम्वाद दुवै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर म चाहिँ सम्बादमा बढी विश्वास गर्छु । आज लडाइँ होइन संवाद गरेर हाम्रा हक खोज्नुपर्छ । हिजो हामीले पाएको सम्मानमा आज ह्रास आएको छ । हामीले त्यो हाम्रो सम्मान फिर्ता ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि म र हाम्रो टिमले सशक्त रुपमा काम गर्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यले बोलीमा त देशको विकास र समृद्धिको स्टेकहोल्डर ठानेको छ, त्यसलाई व्यवहारमै आत्मसात गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसैले पनि हामी महासंघको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसका साथै कोरोनाले थलिएको निजी क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्न पनि सक्षम र सबल नेतृत्व चाहिन्छ र यसैका लागि हामी महासंघ नेतृत्वका लागि अघि बढेका हौँ ।
यी र यस्ता अनेकन समस्या छन् हाम्रा । यसमाथि पछिल्लो समयमा फेरि कोरोना महामारीले समग्र मुलुककै उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई नै सबैभन्दा बढी मारमा पारेको छ । हामीले इतिहासमै यसअघि कहिल्यै नभोगेको र नसोचेको क्षतिको अवस्था भोग्न बाध्य भएका छौँ । मैले यी विचारहरु यहाँसँग राखिरहँदा पनि हामी यो महामारीको चपेटामै छौँ । अझै पनि यो महामारीले कुन रूप लिने हो भन्ने कुराको स्पष्टता कतै आएको अवस्था छैन ।
यसकारण पनि यो जटिल चुनौतीसँग जुध्नका लागि महासंघमा दरिलो नेतृत्वको खाँचो महसुस भएको हो । यही सङ्कटसँग जुध्नका लागि हाम्रो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हामी मुलुकका सबै व्यवसायी साथीहरुलाई बलियो काँध चाहिएकोले उहाँहरुले मलाई अघि सार्नुभएको हो । त्यसैले म नेतृत्वमा पुगेपछि मुलुकका यी समग्र समस्याहरुको समाधानका लागि लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हो यतिखेर महामारीले देश नै आक्रान्त छ भने मलाई लाग्छ उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा छ । हामीले मलाई लाग्छ इतिहासमै यसअघि कहिल्यै नआएको र नसोचेको क्षतिको अवस्था भोग्न बाध्य भएका छौँ । अझै पनि यो महामारीले कुन रूप लिने हो स्पष्ट भएको छैन । त्यही कारण यो सङ्कटसँग जुध्न पनि हामीलाई बलियो र सशक्त नेतृत्व चाहिएको हो । वास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रका लागि यस्तै संकटकै बेलामा बलियो नेतृत्व चाहिने हो । हामीले बेला बेलामा भन्ने गर्छौँ नि नेतृत्व भनेको संकटको सारथि हो भनेर । हो, हामीले त्यही सारथीको काम गर्ने जिम्मेवारीमा जाँदैछौँ ।
म आफूले त यो संकटको सारथि नै भएर काम गर्छु भन्ने मेरो यसैले प्रकृतिले थपिदिएको यो चुनौतीसँग जुधेर देशको समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उँचो पार्ने काममा दरिलो आत्मविश्वासका साथ हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ र नेतृत्वमा पुगेपछि मेरो प्रयास पनि यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।
यहाँले भन्नुभएजस्तै पछिल्लो समयमा महामारीले पनि हामीमाथि अकल्पनीय चुनौती थपिदिएकोले त्यसको ट्याकल गरी देशको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहात प्रदान गर्न र अहिलेको अवस्थालाई माथि उठाउन पनि हामीसँग कार्ययोजनाहरु छन् । हामीले ‘एफएनसिसिआई भिजन २०२५’ को मस्यौदा बनाएर सार्वजनिक पनि गरेका छौँ, हामी त्यसैमार्फत अघि बढ्छौँ । त्यसमा कारोना महामारीका कारण देशको उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा सिर्जित समस्याको समाधानका प्रसस्त कार्यक्रमहरु छन् ।
गृहजिल्ला बागलुङमा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल सम्मानित
साना मझौला उद्योग जोगाउन महासंघद्वारा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
‘निर्यात व्यवसाय अर्थतन्त्रको इन्जिन’, निर्यात प्रवर्द्धनमा नीतिगत सुधारका लागि महासंघले पहल गर्ने
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : चारवटा प्रदेशको नतिजा सार्वजनिक
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मतदान जारी
वर्तमान अशिष्ट राजनीति : लाचार जनता
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग इजलासले माग्यो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
परम्परागत राजाको ठाउँमा आधुनिक गफाडी राजा खोजिँदै त छैन !
आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरू